Jumlada 41-taleefoon ee dhegaha ee soo-saaraha iphone-ka iyo alaab-qeybiye | BWOO
Taleefanka dhegaha ee 41-ku xiran ee iphone
BWOO Wireless Earphone for iPhone
• Dhegaha dhegaha ee bluetooth-ga leh oo leh wax silig naxaas ah.
• Xiriiriyaha hillaaca ee taleefanka gacanta tufaaxa.
• Badhanka mugga si loo xakameeyo mugga kor iyo hoos.
• Taleefan-dhegaha dhegaha-sare leh oo leh makarafoon.
• Chip-ka asalka ah oo aan lahayn isku-xirka bluetooth-ka.
• Naqshadeynta ergonomiga ee xirnaanta raaxada leh.
Taleefan -dhegaha ku xiran ee iPhone
BO-HF10OR oo leh dhegaha dhegaha ee loogu talagalay iPhone, 2-in-1 silig-koontaroolka dhegta ku jira ee bluetooth-ka oo aan lahayn isku-xirka bluetooth-ka, dhegaha dhegaha ee stereo oo leh makarafoon, si diirran u soo dhawee su'aalahaaga.
Adigoo adeegsanaya tufaaxa tufaaxa asalka ah iyo MFI ayaa la heli karaa, si fudud ugu xir taleefanka gacanta adigoon soo muuqan.
1.2m silig naxaas ah oo leh xiriiriyaha hillaaca ee taleefanka gacanta tufaaxa, stereo hillaac oo leh tayo cod aad u fiican.
Naqshadeynta Ergonomic ee xirashada raaxada leh, dhegeyso wax kasta oo aad rabto oo meel kasta u isticmaal.
Waxyaabaha Siligga Copper
Jawaabta Joogtada ah 20Hz-20kHz
Chip Asal ahaan
Awood la qiimeeyay 3mw
Qaabka No. BO-HF10OR
Shayga Taleefan -dhegaha ku xiran ee iPhone
Qty/kartoon 300pcs Cabbirka kartoonka 60x39x45cm
GW/kartoonka 15kgs Xidhmada Sanduuqa hadiyadda
S1. Ma soo saartaa?
A1: Haa, Waxaan nahay soo -saare xirfadle ah
Q2. Ma codsan karaa shaybaarka ka hor inta aanan dalban?
A2: Haa, waxaan soo dhaweynaynaa amarka tusaalaha si aan u tijaabino una hubino tayada. Muunado isku dhafan ayaa la aqbali karaa.
Q3. Sideed u rartaa alaabtayda iyo intee in le'eg ayay qaadataa in aan bixiyo?
J3: Sida caadiga ah waxaan rarnaa shixnadahaaga si degdeg ah. Waxayna badanaa qaadataa 1-3 maalmood haddii aad alaabteena caadiga ah ku iibsato QTY joogto ah. Haddii aad iibsato alaabada la habeeyay, waxay u baahan tahay 7-10 maalmood.Fadlan samir, waxaan la socon doonnaa macluumaadka gaarsiinta ee ugu dambeeyay oo waan ku wargelin doonnaa.
Q4. Maxaan u baahanahay inaan sameeyo haddii aan rabo inaan daabaco calaamadeyda?
A4: Marka hore, fadlan noo soo dir faylka astaantaada oo xallin sare leh. Waxaan u samayn doonaa qaar qabyo ah tixraacaaga si loo xaqiijiyo booska iyo cabbirka astaantaada. Marka xigta waxaan kuu soo saari doonaa 1-2 muunad si aad u hubiso saamaynta dhabta ah. Ugu dambayn waxsoosaarka rasmiga ah ayaa bilaaban doona kadib marka tijaabada la xaqiijiyo.
Q5. Ma samayn karnaa midab la habeeyay?
A5: Haa, waxaan u samayn karnaa midab kasta oo fiilada sida ku cad Lambarka Midabka Pantone.
Q6. Waa maxay dammaanadda alaabtaada?
A6: Waxaan bixinnaa dammaanadda 12 bilood dhammaan alaabooyinka.
Sida loo isticmaalo dhegeysiga dhegaha ee Apple?
Telefoonka gacanta ee Apple wuxuu la imanayaa madaxa dhegta leh oo leh makarafoon, badhamada mugga, iyo badhanka dhexe. Badhanka madaxa ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud uga jawaabto wicitaannada, wicitaannada dhammaato, oo aad maamusho maqalka iyo dib -u -ciyaarista fiidiyaha. In kasta oo dhegeysiga dhegaha leh uu yahay mid fudud xagga naqshadeynta, haddana waa mid aad u badan!
Ku xir dhegeysiga si aad u dhageysato muusikada ama uga jawaabto wicitaannada, oo qofka soo wacaya ayaa codkaaga ka maqli doona makarafoonka ku dhex-jira. Riix badhanka dhexe si aad u xakameyso dib -u -ciyaarista muusikada oo aad ka jawaabto ama joojiso wicitaannada, xitaa marka taleefanka gacanta tufaaxgu xiran yahay.
Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah qaababka loo adeegsado taleefanka dhegaha ee fiilada loogu talagalay iPhone:
[Markaad dhageysato Muusiga]
• Hakin hees ama fiidyoow: riix badhanka dhexe hal mar oo mar labaad riix si aad dib ugu bilowdo dib u ciyaarista.
• U bood heesta buulka: dhaqso u riix badhanka dhexe laba jeer.
• Ku noqo heestii hore: riix badhanka dhexe saddex jeer si degdeg ah.
• Hore u soco: badhanka dhexe laba jeer si dhaqso ah u riix oo hoos u riix.
• Dib -u -socod: Si dhaqso ah u riix badhanka dhexe saddex jeer hoosna u hay.
• Isku hagaaji mugga: Riix badhanka "+" ama " -".
[Markaad hesho wicitaan]
• Ka jawaab wicitaanka soo socda: Taabo badhanka dhexe hal mar.
• Jooji wicitaanka hadda: Taabo badhanka dhexe hal mar.
• Diid wicitaanka: Riix oo hay badhanka dhexe ilaa laba ilbidhiqsi, ka dibna sii daa. Laba dhawaaq yar ayaa xaqiijin doona in wicitaanka la diiday.
• Beddel wicitaanada soo socda ama la hayo oo sii wad wicitaanka hadda jira: Guji badhanka dhexe hal mar. Mar labaad riix si aad ugu laabato wicitaankii asalka ahaa.
[Markaad sawiro qaadanayso]
Maxaa la sameeyaa haddii aadan haysan ul selfie ah markaad rabto inaad sawir iska qaaddo? dhig taleefankaaga, u beddel kaamirada toogashada kaameeraha, ka dibna isticmaal furaha mugga dhegeysiga si aad si fudud meel fog ugu maamusho sawirka.
Hore: USB C Car Charger
Xiga: Qalabka dhegaha ee HF20 oo leh makarafoon
Dhegaha dhegaha ee 3.5mm
Qalabka Dhagaha ee Bluetooth
Telefoonka Dhegaha ee Habboon
Taleefanka Dhegaha ee Hillaaca
Dhegaha Taleefanka gacanta
Buuqa Baajinaya Dhegaha Dhegaha
Dhegaha dhegaha ee Oem
Taleefan Dhegta ah
Dhegaha dhegta Isboortiga
Nooca C Dhegaha
Dhagaha Dhegaha ee aan biyuhu lahayn
Taleefannada Dhegaha ee Wicitaanka leh Mic
Taleefanka Dhegaha ee Wireless
Dhegaha Dhegaha ee Wireless Bluetooth oo leh MIC
TWS Dhegaha Bluetooth
Taleefanka Dhegaha ee Nooca C ah
Qalabka dhegaha ee TWS oo leh baanka korontada
Qalabka dhegaha ee isteeriga ku xiran